Nhau - Pop Up Canopy Kuchenesa Uye Maintenance Mazano
Pop Up Canopy Kucheneswa uye Maintenance Mazano
Kune akasiyana siyana mabhenefiti ekuve nepop up canopy kana iwe uchitambira zviitiko.Nepo mazhinji eaya akagadzirirwa kushingirira kubatwa zvine hutsinye, uchaona kuti kana ukachengeta canopy yako inonamira newe kune ramangwana rinoonekwa.
Heano mamwe matipi ekugadzirisa canopy ekutevera pese paunoshandisa canopy yako:
1- Geza Yako Pop Up Canopy Mushure mekushandisa kwese
Kana uchinge wabvisa kanopi yako yepop up, bata chivharo uye bvisa chero tsvina kana mvura yakawandisa kubva kunaya.Pasinei nokuti unoshandisa canopy yako nguva dzose kana kwete, kuichenesa mushure mekushandisa kwese kuchaita kuti nyika ive nemusiyano kune kuti inotora nguva yakareba sei usati wada imwe itsva.
2- Siya Canopy Yako Yaoma
Kana ukasaomesa canopy yako usati wairongedza mubhegi rayo, unogona kuona kuti inotora hunyoro uye inogona kutsemuka kana kutanga kunhuwa zvakanyanya nekuda kwekuwanda nekuwanda.
Kuchengeta mvura mukati mebhegi rako pasina nzvimbo yekufema kunodya jira nekudaro zvichiita kuti canopy yako ishaye basa zvachose.
3- Gara Rongedza Chero Kukuvadza Kune Canopy Yako Nekukurumidza
Kana iwe ukaona kudiki kuchekwa kana kubvaruka mubutiro rako, kuchigadzirisa nekukurumidza pane kunonoka kunomisa kuti chisakura.Iyo yakakura, iyo inowedzera mukana iwe unoda imwe itsva nokukurumidza.Liquid vinyl yakanakira kugadzirisa madiki madiki muchivharo chako uye chishandiso chinoshanda kuva nacho.
4- Shandisa Mild or Natural Detergents
Mishonga yakasimba inogadzirwa nebleach nemamwe makemikari ane hasha uye anokuvadza.Izvi zvinokwanisa kunyungudutsa zvinhu izvo chivharo chako chakagadzirwa nekudaro kuzvisukurudza kana ukasarudza kuzvishandisa kwakakosha.
Tinokurudzira kuti ushandise sipo yakapfava kana yechisikigo.Neimwe nzira, unogona kugadzira vhiniga chena uye musanganiswa wehupfu yekubikira nemvura inodziya kana inopisa.Usadira mvura iri kufashaira kana zvinhu zvekuchenesa zvakananga pachivharo nekuti izvi zvinoderedza kuperera kwayo zvishoma nezvishoma.
5- Shandisa Zvishandiso Zvinyoro Zvokuchenesa
Iwe haungashandise bhurashi rekutsvaira kuchenesa mota yako, nenzira imwechete yausingafanire kushandisa bhurashi rine hasha kukwesha yako pop up canopy.
Nepo iwe ungasaona chero kukuvadza ipapo, zvinoita kuti chivharo chako chiite kushaya simba nekufamba kwenguva.Kushandisa chiponji chemota uye musanganiswa wemvura inodziya unofanirwa kunge wakakwana kuwana akawanda, kana asiri ese mavara kunze kwecanopy yako.